トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ezilungileyo nezingalunganga, leyo ezijolise Xintai in nesendlu pa
Kulo lokuphumula pa, njl phambi kwesikhululo, unako kwakhona ukudlala kuqaliswa zikhutshwa ngokukhawuleza emva kokuba Xintai. In, izinto ezingalunganga ejolise ezinjenge Xintai, siza kujonga ukuba yinxalenye. Okokuqala, le inzuzo, kwiintsuku nje ezimbalwa lentshayelelo Xintai, kukuba oko kwazi, Kuphezulu badla iinzipho-Horukon kuquka iseti kamnandi endhawini ekuqaleni. Nangona
Xintai, sigqiba kuqaliswa kwakhona evenkileni elingummelwane le modeli ngexesha elifanayo. Xintai Kakade ke kuba xa iimveliso ngamaxesha koko, abantu abafuna ukuba ukubetha isoloko. Noko ke, usondele to've kuvinjwa abathengi ezinjalo, asinalo naliphi ingqiqo ukwazisa engxakini enkulu. Emva koko, ukuba ukudambisa iintsuku ezimbalwa ukususela kwimini yokuqala, ndandisoloko pa ivenkile ukuze isantya ojikeleza ngaso yi malini.
njengoko ngaphandle, ukuba awukwazi beat kuphela evenkileni kwindawo top intshayelelo, kubekho izicwangciso recovery kuba obethe nawo abantu babutha.
Noko ke, ukuba cwaka intsingiselo esisiseko zomdlalo e Xintai, uqalisa iintsuku ezintathu kukho ezininzi ajolise amehlo.
nezingeloncedo, kodwa Xintai kukho ingongoma ukuba kunzima ukuba itafile free, kukuba kusenokwenzeka ukuba zibuyiswe ukusuka malunga ne-3 kwiintsuku kamva. Okokuqala Xintai, wazisa ngosuku lokuqala naye leloto, ukususela ngomhla wesibini, kananjalo kuvame ukuba itafile ngokupheleleyo ukususela kusasa. Ukongeza, kwimeko imifuziselo ezithandwayo, njalo okanye abanye abantu lokulinda free, ukuba kukho intlawulo, ukuba oko kuya kuba mbalwa ke amathuba okuba ibe itafile free. Ukuba Ngokuqinisekileyo
hit, kukuba wena musa nje ukuya kwenye kusasa.
kwaye uhlengahlengiso isikhonkwane kunye Horukon sentlalo, Xintai ukuze ka Barker, indawo iintsuku ezintathu ukususela kwintshayelelo ngosuku lokuqala, kodwa sivula ngaphezu uhlengahlengiso eqhelekileyo, ukususela ngomhla 4 sikhundla, ngoko iza kungena imo ekuphulukenwe nalo , unalo inomthetho kancinane.
Olu Xintai ngenzuzo kunye nengeloncedo avareji elibe pa, kwi pa parlour eyoyikekayo, qinisa ukusuka Xintai intshayelelo ngosuku lokuqala, kukho kwakhona iqela ivenkile eza nomnikelo. Le Xintai onjalo elibe pa, ukunyaniseka Benefits Ndicinga akukho nto ingako.
Ethetha ngamandla, lumalunga kukuba kugwayimbo yemodeli yakutshanje. Xa kwakhona ukusuka kusuku olunye, inzuzo Xintai izakulahleka bonke. Ukuba injongo
Xintai, yiya ukubetha intshayelelo ngosuku lokuqala kunye merit, ngoko iintsuku ezimbini Ukuba uhlengahlengiso isikhonkwane kunye Horukon sentlalo, ndicinga ukuba uza kuba ukuba loya ngendlela wamandla.
imifuziselo zamvanje, kodwa ufuna ukubetha imifuziselo ngakumbi ukuba ethandwayo, ukuba intonga lokuphumelela, Xintai ndiyacinga ukuba kunzima unokuyibuyisa. Jonga lo mkhuba Xintai ngexesha lokuvela
hamba kakuhle, nesendlu pa, okanye inzuzo iivenkile ezininzi e Xintai, okanye ukuzama ukubetha ukusuka Fumana ukuba ezingalunganga rhoqo shop ukusuka.